Họtelu oka ibe na Kano di na Jumia Travel - Onu ahia na ihe Nyocha
Hotels in Kano (Capital City)
Hotels in Kano Municipal
Hotels near Kano airport
Kano bụ otu steeti na Nigeria. Ọ di na obodo ugwu- na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Nigeria. Isi obodo ya bu nke a na-akpọ kwa Kano, bụ nke kachasị ukwuu na nke nwere otutu onu ogugu mmadụ kachasi ukwu n’ime steeti ya. Kano steeti na Katsina Steeti nwere ókè agbataobi n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke obodo Kano, buru kwa nke di na n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ n’ime Steeti. Kano steeti nwere ulo ochichi ime obodo Govoomenti di iri anọ na anọ di n'ime ya nke ọtụtụ ndi mmadụ bi na ya bu ndi Hausa. Kano steeti bu nke amaara di ka ndi abụọ kasị ukwuu na ihe azụmahịa na Nigeria, ndi bi na ya bu ndi na agba mbo maka ihe afo ga eri site na azụmahịa nke ihe oru ugbo.
Ogige Njem Nleta na Kano Steeti
E nwere ebe isi njem nleta atọ na Kano Steeti, Ahia Kurmi bụ otu n’ime ha. O bu nke aturu ntuala ya ná mmalite narị afọ iri na ise (15th Senchuri) ka bu kwa ogige ebe azumahia ruo ụbọchị taa. Ọ bụkwa ahịa kachasị ukwu na steeti Kano ma buru kwa nke kachasi ukwuu na mba Afrika. Nke abụọ bụ Obí nke onye eze, nke Muhammadu Rumfa wuru, bụ nke kachasi ochie na-aga kwa n'ihu buru ogige ebe ihe banyere atumatu ochichi ikike na Nigeria.
Ihe nleta nke atọ bụ mbidi ulo ochie nke obodo Kano a na akpo (Ancient Kano City Walls) na okwu beeke, nke mejuputara Ahia Kurmi, obí onye eze na ugwu Dala. Ọ bu kwa nke edepụtara dị ka ogige ebe UNESCO nke otu mba uwa.
Họtelu ndi kachasi nma na Kano
Kano steeti nwere otụtụ họtelu ndi gbasaara gburugburu n’ime obodo ya, ọtụtụ n'ime họtelu ndị kasị mma bu ndi dị n’ime obodo Kano, nke ụfọdụ n’ime ha bụ Horizon Họtelu Limitedi, Niimah Guest Palace, Tahir Guest Palace na ọtụtụ ndị ọzọ. Họtelu ndị a na họtelu ndị ọzọ di elu na di Kano bu nke enwere ike na ebe odi mfe tinye akwụkwọ maka onunu na ha na Travel.jumia.com
Usoro Ugbo Njem Na Kano
Enwere ọdu ugboele ukwu oje mba nke di na Kano Steeti bu nke eji na eje ozi, bu nke di n’ime isi obodo Kano. Maka ime nkpaghari na gburugburu Kano, ugboala tagzi na acha odo odo na anụnụ anụnụ bu nke di mfe enwere ike ikwu-ugwo ma buru ga ebe ị chọrọ ịga na onu ego. I nwekwara ike ịkpọ onye ugboala nwere ukwu abuo nke akwu-ugwo ebunye maka obere njem na ebe di nso.
Họtelu Kano (Capital City) Họtelu Lagos Họtelu Ogun Họtelu Federal Capital Territory Họtelu Oyo Họtelu Delta
Họtelu Rivers Họtelu Kaduna State Họtelu Abia State Họtelu Plateau Họtelu Nasarawa State Họtelu Osun
Tahir Guest Palace Fountain Inn Badala Hotel Mandela Hotel & Suites Aljazeera Hotel Jossy Royal Hotel